umshini wekhekhe wokunyathelisa isithombe China Manufacturer
Incazelo:Ukuphrinta kwephrinta ye-Cake,I-Decor Decorating Printer Uk,Iphrinta ye-Cake ehamba phambili
Home > Imikhiqizo > Iphrinta yokudla > Iphrinta ye-Cake > umshini wekhekhe wokunyathelisa isithombe
Yenza ikhofi yokuphuza i-foam isiphuzo ngezindlela zakho ezivamile. Beka indebe kumshini, khetha isithombe kusuka
umtapo womtapo wokuqukethwe noma uvumele amakhasimende akho aklanywe ukuklama. Umshini wakho uzongena kumasekhondi nje. Nika
Ikhekhe le-printer uk elihlobisa ikhekhe lisetshenziselwa ukuphrinta izithombe ekudleni.Inezinhlobonhlobo ezingu-6 ezingaprinta izithombe ezimibalabala futhi ezikhanyayo.Umphumela wokuphrinta ucacile.Umshini ungashintsha umsebenzi weMibhalo.
I-printer engcono kakhulu ye-cake ne-ink edible ingaprinta kuzo zonke izinhlobo zokudla.Izinto zonke zinganyatheliswa njengezodwa eziyingqayizivele ngezithombe ezimibalabala
Ukuphrinta kwephrinta ye-Cake I-Decor Decorating Printer Uk Iphrinta ye-Cake ehamba phambili Ukudla kwephrinta ye-3d Ukuqashiswa kwephrinta ye-UV flatbed Inani lephrinta ye-Cake Iphrinta ephrintiwe ye-Ausjet Ukulungiswa kwephrinta ye-UV Flatbed